Imbali ngasemva kwehotele eNtsha eNtofontofo yakwaSirayeli, iSetai Tel Aviv - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Yenzeka njani iNqaba yenkulungwane ye-12 ukuba yihotele eNtsha ka-Israyeli eNtofontofo
Yenzeka njani iNqaba yenkulungwane ye-12 ukuba yihotele eNtsha ka-Israyeli eNtofontofo
Inqaba eyayisakuba yinqaba ye-Crusader ngenkulungwane ye-12 ngoku yiSetai Tel Aviv.UAsaf Pinchuk
ISetai Tel Aviv ivulwe kwinyanga ephelileyo kunxweme loLwandle lweMeditera xa ukuguqulwa kwenqaba ye-Crusader yenkulungwane ye-12 kwincwadi yokugqibela neneyona intle kwa-Israyeli yagqitywa. Kodwa yintoni kanye kanye eyenziwayo ukuguqula indawo eyomeleleyo ibe luluvo?
Ishumi elinambini leminyaka kunye ne- $ 100 yezigidi, ngokucacileyo.
Ininzi imbali ekufuneka igcinwe apha, ke zonke iinkcukacha ezincinci zezi ntlobo zeeprojekthi kufuneka zonganyelwe kwaye zamkelwe, ucacisa uDana Leitersdorf waseLondon Uyilo lweAARA. Iqela lakhe lisebenze kunye Abacwangcisi beFeigin , inkampani yendawo, kunye nolondolozo lwezakhiwo U-Eyal Ziv Ukuhlengahlengisa kwakhona indawo eyimbali eyimbali ibe yindawo yokubaleka enamagumbi ayi-120. Ihotele yeyakwaNakash Holdings, ipotifoliyo yotyalo-mali yosapho lweNakash, abasunguli be IJordache Jeans othenge i-Setai Miami Beach yasekuqaleni kwi-2014. Ngokucacileyo, indleko zokuhlaziya isakhiwo esineembali yayingengombandela wale ndlu inemali.
Isakhiwo sokuqala sehotele, esaziwa njenge ukishle (ITurkey yendlu yasejele), yaqala yakhiwa njengenqaba yobukumkani beCrusader, emva koko yaphinda yenziwa njengendawo yobukhosi baseOttoman. Ekugqibeleni yajikwa yaba sisikhululo samapolisa, ebesisebenza kude kube ngo-2005, xa usapho lakwaNakash lwaqala inguqu.
I-Setai ibekwe ngobuchule njenge-glossy, nangona inempikiswano, isimemo sokundwendwela i-Jaffa, idolophu yase-port eneminyaka engama-4,000 efakwe kwi-Tel Aviv yanamhlanje. I-Setai ihleli kanye kuLwandle lweMeditera.I-Assaf Pinchuk Photography
IJaffa yachuma phakathi kwinkulungwane ye-19, eyile yokuthunyelwa kwayo ngaphandle Iiorenji zeJaffa , ezazikhuliswa kuqala ngamafama ama Arab. Emva kokuba u-Israyeli evakalise inkululeko ngo-1948, ukungqubana phakathi kwama-Arab namaYuda kwasishiya isithili saseluthulini; Ngokukhawuleza uJaffa wazaliswa lulwaphulo-mthetho, yiyo loo nto isikhululo samapolisa. Ngenxa yoko, kwakhiwa izibuko elitsha emantla eTel Aviv, apho uninzi lwesixeko sisaqhubeka.
Kodwa xa imakethi yokuthengisa izindlu nomhlaba yeTel Aviv iqala ukunyuka, uJaffa wabuya wagxila, ngakumbi egcinwe umhlaba wakhe ongasetyenziswanga. Emva kwamashumi eminyaka yokuvuselelwa-kunye nezigidi ezichithwe ngumasipala -izitalato zaqala ukuxakeka. Bebenomdla wokufudukela kwiSixeko esiDala saseJaffa, amagcisa kunye nabaqambi bavula iigalari kunye neevenkile ngelixa ii-cafés zivelela kwimiphetho yentengiso ende kaJaffa. Indawo isagcina isazisi se-bohemian, enkosi kwimbali yayo yokusebenza nzima njengesixeko sezibuko.
Kungenxa yoko le nto abahlali benokuphakamisa ishiya kwi-Setai's $ 500 ngobusuku bokuqala kwenqanaba, yenye yezona ziphezulu eTel Aviv.
Ngokuqinisekileyo, ihotele eneenkwenkwezi ezintlanu iyabanjwa ngakumbi kunesikhululo samapolisa esidala, kodwa ubunewunewu kweli nqanaba linotyekelo lokukhuhla uluntu olukulo. I-Setai ayisiyiyo kwaphela kule ndawo ithatha indawo. I-Jaffa, i-W Hotel, nayo izakuvula ngeli xesha lonyaka, kunye neeyunithi zokuhlala ezingama-38, kubandakanya nendlu ephezulu yendlu enexabiso $ 41 yezigidi ngowama-2015 — olona luhlu luphezulu kwilizwe ngelo xesha.
Kukuphi konke okubuza lo mbuzo: Ngaba ngumnyango wangaphambili weSetai Jaffa, okanye ukuphuma kukaJaffa?
Kwelo thambo, iSetai yenze inqaku lokuphepha ukungcwaba imbali. Ihotele yokunethezeka iye yemba ngokoqobo eyadlulayo kwaye yayibeka kwisiboniso. Njengale miqolo egciniweyo, iinkcukacha zembali ziye zahlonitshwa kwindawo yonke.I-Assaf Pinchuk Photography
Elona candelo lintsonkothileyo nelilelona lide [lokulungiswa] yayizinto zokumbiwa kwezinto zakudala ezaziphambi kweprojekhthi, kwaye zibandakanya iinkundla kunye nomphakathi wezakhiwo, utshilo uZiv. I-Israeli Antiquities Authority kunye noMbutho woLondolozo lwakwa-Israyeli bobabini babenesandla kulo mbandela, kananjalo, baqinisekisa ukuba ingqibelelo yoyilo yayigcinwa ngokwemvelaphi yayo. Oko kubandakanya iintsalela zeCrusader kunye neendonga zaseTurkey ngoku ezibandakanyiweyo kumhombiso wehotele.
Bhukisha i-massage kwi-spa engaphantsi komhlaba kwaye uyakubona iziseko zembali ecaleni kwempilo yanamhlanje: emva kodonga lweglasi lwe-sauna, iarch engavulwanga ngoku yenziwe ngokusekuhleni. Unakekele imbonakalo yembali ngexesha leseshoni ye-cardio? Kwindawo yokuzivocavoca ekufuphi, iitreadmills isikwere ecaleni kothotho lwee-archways ezibonakalisiweyo.
Amathambo esakhiwo, uninzi lwazo olwakhiwe ngexesha leBritane Mandate, ashiyeke engatshintshwanga. Nangona kunjalo, iphiko elitsha kunye nemigangatho emibini eyongezelelweyo yamkela indawo yoqobo, iphakamisa iphalethi ye-rustic ngokugqiba kakuhle kubandakanya imithi emnyama kunye neethayile ezikhazimlayo.
Oko akutsho ukuba kwakulula ukuhlanganisa iinkcukacha zembali kunye nobuhle bwanamhlanje. Kuya kufuneka ufumane iindlela zobuchule zokuzoba ubunewunewu ngaphandle kwesithuba-ukuveza okudala kunye nokugciniweyo, ngelixa usenza ukuba uzive umtsha kwaye ulungile, amanqaku eLeitersdorf.
Imigangatho ephezulu ibandakanya amagumbi eendwendwe kunye nee-suites, ngelixa imigangatho yaphantsi iyindawo eqhelekileyo eneeoks ezisondeleyo. Ngokudlula nje kwigumbi lokungenisa, igumbi lokuphumla lifakwe izihlalo ezityebileyo kunye neepateni kunye nee-ottomans, zihlanganisene phantsi komqolo weengqameko ezixineneyo. Isakhiwo esisembindini, esineentendelezo ezichumileyo macala omabini, sigcina indawo yokutyela yaseJAYA kwiholo elitye; imiphetho eratery erhabaxa zisuswa yi-banquettes ethambileyo yesikhumba kunye ne-marble bar yaseBrazil eblowu.
Uluhlu lwezakhiwo ngoku luthungiwe kunye neendlela zeglasi ezijikeleze iinkundla ezimbini ezazisetyenziswa ngaphambili njengeeyadi zentolongo. Ngentloko yelifa likaJaffa lezitiya, ukufafazwa kweminquma kunye nemithi yeziqhamo zemithi yezihlahla zomthunzi iitafile nezitulo ezivela elangeni elinzima. Izinto zangoku zixubene neenkcukacha zembali, ngakumbi kumagumbi eendwendwe.I-Assaf Pinchuk Photography
Kwimizamo yokuvela kwimvakalelo engenanto kunye nengqele yentolongo, abayili bathe phithi kukukhanya. Kwamagumbi eendwendwe, izibane ezinde ezinde, ezijikelezileyo zixhonywe eluphahleni ngapha nangapha kwebhedi, zibiyelwe ngesinyithi, isakhelo esenziwe ngokomfanekiso waseArabhu; Iqoqo lezinto ezenziwe ngeglasi ezenziwe nge-chrome ezikhanyayo kwikona. Imitha yelanga ihamba ngamatye amakhulu afakwe iingcango ezivulekileyo ukuba zenze iibhalkhoni ezincinci.
Izinto zakudala ezifunyaniswe ngexesha lokwakhiwa kwehotele nazo ziya kuboniswa. Lindela ukubona iimali zemali kunye neekomityi zekhulu le-12, ukongeza kwezona zinto zibalulekileyo zifunyenweyo: isixhobo esinezixhobo ezisusela kwiminyaka ye-1890, ixesha elibizwa ngokuba lixesha laseTurkey. Ibhari yokulinda sele inikezela iziselo ezinxilisayo kunye neminquma esikiweyo, ngokuqinisekileyo isibini semikhonto yamaxesha aphakathi iya kuba sekhaya.
Besingafuni ukugcwalisa ihotele ngesihombiso sendabuko saseTurkey kwaye sibe sempumlweni nayo, uyachaza uLeitersdorf. Kukho ii-aksenti ezichuliweyo, ezinje ngeerugs zaseTurkey kumagumbi kunye neembiza zakudala kunye neetreyi kwindawo yokutyela, ezinqwala kwiingcambu zepropathi.
Akukho sidingo sokuzilungiselela izinto zakudala, nokuba-amagumbi eendwendwe yinto eqhelekileyo yokubuka iindwendwe kwezi mini, zonke zibekwe elityeni. IiTV ezinescreen esinezixhobo zixhotyiswe uluhlu oluqhelekileyo lwamajelo bhanyabhanya, iishaja ze-USB zakhiwe ngaphakathi kunye nemivalo encinci igcinwe kakuhle. Thatha udiphu kulo mhlaba obalaseleyo waseJaffa.I-Assaf Pinchuk Photography
Ukubeka indawo kwizibuko elitsha lomnxeba, inkwenkwezi yehotele liphezulu kumgangatho wesine ophahleni lwophahla olungapheliyo; ejonge empuma kwaye ime nkqo kwiMeditera, kufana nokuntywila ngqo kwisibhakabhaka.
Lixesha kuphela eliza kuxela ukuba le meko intsha iza kuthetha ntoni kwilaphu laseJaffa lasezidolophini. Kodwa ngokutshata iinkcukacha zembali ngezinto zobunewunewu zale mihla, i-Setai yenze ityala elinamandla ngekamva eliqaqambileyo lommandla, ngaphandle kokucinezela elidlulileyo elinemibala.
Kutheni abaphambukeli kusenokwenzeka ukuba babekhona kwaye basindwendwele ngo-2017, ngokweHarvard's Top Astronomer
Umboniso we-90's Movie Singathanda ukubona iHollywood Reboot
Ngaba uJeff Bezos wavuma nje ukuxhaphaza i-USPS njenge-'Delivery Boy 'yeAmazon?
UMartha Marcy May Marlene yiNkcubeko yePhenomenon
Ngaba u-cohen waya kwi-prague
Elona xesha lilungileyo lokuthenga ii-recliners
kwicala elingasempuma kwicala lentlalontle
yintoni igama elingu-rae sremmurd
Inombolo yefowuni yokubuyela umva yokujonga iziphumo zasimahla ezinegama
ukukhangela iifowuni simahla ngenombolo